Cryptocurrency နှင့်အခွန်ကောက်ခံမှုစိန်ခေါ်မှုများ - Token Myanmar
အခွန်အာဏာပိုင်များသူတို့ငွေကြေးခဝါချရန်နှင့်အခွန်ရှောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သောကြောင့်, Cryptocurrencies မကြာသေးမီကသတင်းများတွင်ခဲ့ကြပြီ။ ပင်တရားရုံးချုပ်က Black ငွေအပေါ်တစ်ဦးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးအတွက်ကုန်သွယ်စိတ်ပျက်အားလျော့စေအကြံပြုခန့်အပ်ခဲ့သည်။ တရုတ်အချို့က၎င်း၏အကြီးဆုံး Bitcoin ကုန်သွယ်အော်ပရေတာကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ကြသတင်းပို့ခဲ့သည်နေစဉ်, ဥပမာ USA နှင့်ကနေဒါအဖြစ်နိုင်ငံအများ cryptocurrency အတွက်စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ရန်အရပျ၌ဥပဒေများရှိသည်။
Cryptocurrency, ထိုနာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူဖြစ်ပေါ်လာအောင်စာဝှက်ထားတဲ့ codes တွေကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီကုဒ်တွေကိုအသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အခြားကွန်ပျူတာများကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ အဲဒီအစားစက္ကူပိုက်ဆံသုံးပြီး၏, အွန်လိုင်းမှလယ်ဂျာသာမန်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း entry တွေကြောင့် updated ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်သောသူရဲ့အကောင့် debited ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရောင်းချသူရဲ့အကောင့်ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ဘယ်လိုအရောင်းအဝယ် Cryptocurrency အပေါ်ထားကြသလဲ
တစ်ဦးငွေပေးငွေယူတဦးတည်းအသုံးပြုသူအစပျိုးသောအခါသူမ၏ကွန်ပျူတာငွေကြေးလက်ခံရရှိသည့်လူတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂလိက cipher နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အများပြည်သူသုံး cipher သို့မဟုတ် public key ကိုထွက်ပေးပို့သည်။ ကို receiver အရောင်းအဝယ်လက်ခံလျှင်, စတင်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များတွင်တိုင်းအသုံးပြုသူမှလူသိများကြောင်းများစွာကိုထိုကဲ့သို့ encrypted codes တွေကိုတစ်ဘလောက်ပေါ်ကို code အပိုင်းအစတစ်ခုအလေးထား။ '' မိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ '' ဟုခေါ်တွင်အထူးအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး cryptographic ပဟေဠိဖြေရှင်းအားဖြင့်လူသိရှင်ကြား shared ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖို့အပိုကုဒ် attach နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမို cryptocurrency ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးမိုင်းလုပ်သားတစ်ဦးငွေပေးငွေယူအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်စံချိန်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်လို့မရပါ။
Bitcoin ဥပမာ, ဝယ်ယူမှုပြဋ္ဌာန်းဖို့အဖြစ်ကောင်းစွာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်ပြုလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်လက်ခံသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း app တစ်ခုကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်သူတို့ကို Near Field Communication (NFC) အသုံးချဖို့အားဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထိုကဲ့သို့သော Paytm သို့မဟုတ် MobiQuick အဖြစ်သာမန်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ရန်အလွန်ဆင်တူကြောင်းသတိပြုပါ။
Die-ခက်ခဲအသုံးပြုသူများသည်ယင်း၏ကျတ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသဘာဝ, နိုင်ငံတကာလက်ခံမှု, အမည်ဝှက်, မွဲနှင့်အချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက် Bitcoin ကျိန်ဆို။ စက္ကူငွေကြေးမတူဘဲမရှိဗဟိုဘဏ် cryptocurrency အပေါ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားထိန်းချုပ်သည်။ ငွေသွင်းငွေထုတ်လယ်ဂျာစာအုပ်တွေတစ် peer-to-peer network အတွင်းရှိသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါကသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပါဝါနှင့် databases ကိုမိတ္တူအတွက်တိုင်းကွန်ပျူတာချစ်ပ်ကွန်ယက်သည်ထိုကဲ့သို့သော node ကိုအပေါ်သိုလှောငျထားကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဘဏ်များသည်, မြဲမြံစွာအားဖြင့်ငှားရမ်းထားပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီ၏လက်၌နေသောဗဟို repositories ကအတွက်စတိုးဆိုင်ငွေပေးငွေယူဒေတာ။
ဘယ်လို Cryptocurrency ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက်အသုံးပြုရနိုင်သလား?
ဗဟိုဘဏ်များသို့မဟုတ်အခွန်အာဏာပိုင်များက cryptocurrency အရောင်းအကျော်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ရှိကွောငျးအဆိုပါအလွန်တကယ်တော့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအစဉ်အမြဲနေတဲ့အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီမှ tagged မရနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကကျနော်တို့က transactor တရားဝင်သို့မဟုတ်မတနျဖိုး၏စတိုးဆိုင်ရယူထားပါတယ်ရှိမရှိမသိရပါဘူးဆိုလိုသည်။ ဘယ်သူမှငွေကြေးလက်ခံရရှိမှုအတွက်ပေးထားခဲ့ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြောပြနိုင်သကဲ့သို့ transactee ရဲ့စတိုးဆိုင်အလားတူတရားခံဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယဥပဒေကဲ့သို့သော virtual ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုပြောပါသနည်း?
virtual ငွေကြေးသို့မဟုတ် cryptocurrencies လေ့ဆော့ဖျဝဲတဖဲ့အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှကုန်စည်အက်ဥပဒေ, 1930 များ၏ရောင်းရငွေအောက်မှာကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။
မိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်သူတို့၏ရောင်းချမှုအပေါ်ကောင်းတစ်ဦး, သွယ်ဝိုက်အခွန်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်အဖြစ် GST သူတို့ကိုသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များနှင့် Pre-paid ညှိနှိုင်းတူရိယာအုပ်စိုးသည့် cryptocurrencies အိန္ဒိယနှင့် RBI အတွက်ငွေကြေးအဖြစ်တရားဝင်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အတော်လေးနည်းနည်း, ဆက်ဆက်လဲလှယ်၏ဤအလတ်စားကနေတဆင့်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းခွင့်အာဏာမရှိသေးပါဘူးနေဆဲရှိပါသည်။
အိန္ဒိယတွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးတို့ကလက်ခံရရှိမည်သည့် cryptocurrencies အရှင်ဤတိုင်းပြည်သို့ကုန်စည်တစ်ခုတင်သွင်းအဖြစ်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဥပဒေ, 1999 တို့ကအုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယအခွန်ရှောင်မှုကိုသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံ-ခဝါချမှုလုပ်ငန်းများနှင့်သိသင့်ဖောက်သည်စံချိန်စံညွှန်းများဘက်တော်သားတို့အတွက် built-in အကာအကွယ်နှင့်အတူအထူး Exchange များအတွက် Bitcoin ၏ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဖလှယ်မှု Zebpay, Unocoin နှင့် Coinsecure ပါဝင်သည်။
Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဥပမာ, ကိုလက်ခံရရှိခွဲဝေအပေါ်တရားစွဲဆိုခံရဖို့ထိုက်ဖြစ်ကြသည်။
ကြောင့် Virtual ငွေကြေးပါဝင်သောအာမခံရောင်းချခြင်းမှလက်ခံရရှိမြို့တော်အကျိုးအမြတ်လည်းဝင်ငွေနှင့်အိုင်တီ၏နောက်ဆက်တွဲအွန်လိုင်းပုံစံတင်ပို့ရန်ပြန်လည်ရောက်ရှိအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံရဖို့ထိုက်ဖြစ်ကြသည်။
ဒီငွေကြေး၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြီးမားသောဖြစ်သင့်, သင်ကစိတ်ကြိုက်အခွန်ဝန်ဆောင်မှု၏အကူအညီရယူချွတ်ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းရှည်သောလမ်းဖြင့်အခွန်လိုက်နာမှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြေလျှော့ပေးပါပြီ။
4 လွယ်ကူခြေလှမ်းများခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင် Cryptocurrency Make ရန်ကဘယ်လို
ကြောက်လန့်, တရုတ် Cryptocurrency တားမြစ်မ
Bitcoin ohne Gebühren Kaufen
FAKE Volume – Crypto Exchange Shadiness with KuCoin & More
New BOT Trade for Bittrex, Binance, Coinbase, Bitstamp.
Биржа Binance – торговля для новичков / Диаграммы глубины Depth / OCO ордер